KENYA: Feejignaan Dhanka Ammaanka Ah oo looga Dhawaaqay Lamu iyo Dowladda oo Digniin Soo Saartay.
Sunday November 19, 2017 - 12:19:57 in Wararka by Super Admin
Laamaha ammaanka wadanka Kenya ayaa walaac ka muujiyay in Xarakada Al Shabaab ay weeraro hor leh ka fuliso degmooyin iyo deegaanno katirsanka wadankaasi oo dhaca bariga qaaradda Afrika.
Wararka ka imaanaya Kenya ayaa sheegaya in barakac xooggan uu markale ka bilaawday magaalooyinka xeebaha ku teedsan kadib markii ay soo baxeen digniino ku aaddan in dagaalyahanada Al Shabaab ay weerar ku yihiin saldhigyada ciidamada booliska iyo deegaanada ay kunool yihiin dadka Kirishtaanka Kenyaanka ah.
Mas'uuliyiinta dowladda Kenya waxay sheegeen in inta badan dadkii Nasaarada Kenyaanka ahaa ay barakac bilaabeen waxaana wadnaha farta lagu hayaa weeraro ka yimaad Al Shabaab, meelaha ugu daran ee cabsidu ka taagantahay ayaa ah gobolka Lamu ee xeebta ku teedsan iyo magaalada Mombasa.
Sarkaal u hadlay booliska Kenya ayaa sheegay in ciidamadooda ay heegan sare geliyeen sidoo kale wuxuu carabaabay iyo magaalada Mandheera ee xuduud beenaadka ku teedsan ay ku biiriyeen meelaha feejignaanta dhanka amniga ah lageliyay ciidamada booliska.
Walaacan dhanka amniga ah ee Kenya lagasoo sheegayo ayaa imaanaya xilli xarakada Al Shabaab ay sare uqaadday weeraradeeda ka dhanka ah ciidamada kenya ee Soomaaliya ku sugan, bishii lasoo dhaafay weeraro ka dhacay gobollada Wajeer iyo Mandheera ayaa lagu dilay tobaneeyo askar iyo saraakiil Kenyaan ah.